David Silva oo xaqiijiyay inuu ka tagayo kooxda Man City dhamaadka xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Manchester) 21 Maajo 2020. Xiddiga reer Spain ee David Silva ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Manchester City, maadaama uusan wali u cosbooneysiinin qandaraaskiisa kooxda heysata horyaalka Premier League.
David Silva ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo dhamaadka xilli ciyaareedkan kooxda Manchester City, kaddib muddo dhan 10 sano uu la joogay, wuxuuna 2010-kii uu kaga soo biiray naadiga reer Spain ee Valencia.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay xiddiga reer Spain ee David Silva, waxaana uu yiri:
“Wareegtadii waa la xiray, waxaan ku raaxeystay 10 sano kubada cagta oo halkan ah, isla markaana aan ilaawi doonin nolosheyda wax walba ee dhaca”.
“Tan iyo markii aan halkaan imid iyo daqiiqadii ugu horeysa, qof walba waxaan ka helaa daryeel weyn, waxaa jira ixtiraam xushmad leh dhammaan shaqaalaha kooxda, ixtiraam labada dhinac ah oo aanan ilaawi karin, waa qoyskeyga laakiin hada waxaan doonayaa inaan galo tartan cusub”.
Waxaa xusid mudan in David Silva uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Valencia sanadkii 2010 qiimo dhan 25 million pounds, wuxuuna kula guuleystay Man City 4 jeer ee horyaalka Premier League, FA Cup labo jeer, iyo Carabao Cup oo 5 jeer ah.